Tsy nandeha vakansy : maro ny tolotra fialamboly eto Antananarivo | NewsMada
Tsy nandeha vakansy : maro ny tolotra fialamboly eto Antananarivo
Par Taratra sur 19/08/2016
Betsaka ireo ray aman-dreny tsy afaka nitondra ny zanany nandeha nivoaka an’Antananarivo nanao vakansy noho ny antony maro. Eo ny tsy fahafaha-manao ara-bola, fa eo indrindra koa ny asa tsy azo ilaozana, ny tsy fahasalamana…
Miezaka manome tolotra fialamboly ho an’ireo ankizy tsy afaka mandeha lavitra araka izany ireo karazana fikambanana na mpikarakara hetsika. Mivoatra manaraka ny toetrandro izany tolotra izany.
Aterina maraina amina toerana iray ny ankizy ary amin’ny hariva vao alain’ny ray aman-dreniny. Tsikonina sy famantarana ny karazana nahandro gazy no hataon’ny ankizy amin’izany.
Misy koa ny toerana hahafahan’ny ankizy mivelatra ara-batana, dihy, lomano, milalao baolina, mitaingina bisikileta…. Ankoatra izany ny lalaon-tsaina toy ny fanorona, katro sy ireo kilalao maro mahasarika ny ankizy.
Efa matihanina amin’ny fitaizana ankizy ireo tompon’andraikitra misahana ny toeram-pilalaovana. Hentitra ihany koa amin’ny fanaraha-maso mba tsy hitera-doza ny karazan-dalao atao. Efa matipaika ny lamina hiarovaa ny ankizy amin’ny mety ho hala-jaza.
Manampy ny ray aman-dreny amin’ny fitaizana ny ankizy ireny. Tsy mijanona ora irery ao an-trano miaraka amin’ny mpanampy ny zaza fa afaka mivelatra miaraka amin’ny namany any am-pilalaovana. Tsy maimaimpoana anefa izany rehetra izay fa mila vola avokoa.